'Khilaafka baarlamaanka oo la xaliyay' - BBC Somali
'Khilaafka baarlamaanka oo la xaliyay'
29 Nofembar 2014
Image caption Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya
Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in is-afgarad laga gaaray khilaafkii u dhexeyey xubnaha baarlamaanka ee ku aaddanaa mooshinka ka dhanka ah xukuumadda Ra'isulwasaare Cabdiwali Sheekh Axmed.
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Guddoonka Baarlamaaanka ayaa lagu sheegay in kulan ku saabsan mooshinka la qaban doono talaadada soo socota. Mooshinkaasi waxaa cod loo qaadi doonaa 6-da bisha December.
''Annaga oo guda galnay wada-tashi iyo isku soo dhaweyn xildhibaanada ku kala aragti duwan mooshinka ayaa waxaa la isla gar waaqsaday sidii ay isaga kaashan lahaayeen ilaalinta jiritaanka wadajirka iyo habsami u socodka howlaha Golaha Shacabka loo igmaday'', ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Guddoonka Baarlamaanka.
Xubin ka tirsan taageerayaasha Ra'isulwasaaraha ayaa BBC-da u sheegay in ay ka qayb geli doonaan dooda balse ay weli su'aal gelin donaan 'sharci ahaanshaha mooshinka'.
Khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda Soomaaliya oo cuuryaamiyay howlaha xukumadda ayaa ka dhashay isku-shaandhayn aan dhaqan-galin oo uu shaaciyey Ra'isulwasaare Cabdiwali sheekh Axmed bishii October, balse uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxammud ku gacan seyray.